तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो ८५ हजारले गरे अवलोकन – Indepth.com.np
तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो ८५ हजारले गरे अवलोकन
तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो अवलोकन गर्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित ९९ रोपनी खुला चौरमा जारी तेस्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पोमा २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
एक्स्पो आयोजक भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी संघले मेलाको चार दिनको अवधिमा २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको जनाएको हो ।
संघका उपाध्यक्ष एवं मेलामा मुख्य संयोजक माधवप्रसाद प्रजापतिले चार दिनको अवधिमा शनिबार सर्वाधिक कारोबार भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो दिन पाँचपाँच करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो तर शनिबार एकैदिन दस करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको उनले दावी गरे ।
‘पहिलो र दोस्रो दिन पाँचपाँच करोडको मात्रै कारोबार भए’, उनले भने, ‘तर शनिबार एकै दिन दस करोडको कारोबार भयो । आइतबार भने सात करोड हाराहारीमा कारोबार भयो ।’
सोमबार अन्तिम दिनमा थप दस करोड बराबरको कारोबार हुने उनले अनुमान गरे । मेला अवधिभर करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको थियो ।
८५ हजारले हेरे मेला
त्यस्तै आइतबारसम्ममा करिब ८५ हजार जनाले मेला अवलोकन गरेको संघका अध्यक्ष पुण्यराम खाताखोले जानकारी दिए । उनका अनुुसार शनिबार सर्वाधिक ४० हजार जनाले मेला अवलोकन गरेका थिए ।
आइतबार भने यो संख्या १५ हजारको हाराहारीमा रहेको उनले सुनाए ।
६० प्रतिशत बुकिङ
अध्यक्ष खाताखोले मेलामा नगदै तिरेर सामान किन्नेभन्दा बुकिङ गर्नेहरु धेरै रहेको बताए । कूल कारोबारमध्ये ६० प्रतिशत बुकिङ रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार मेलामा धेरैजसो ठूला र महंगा सामान छन् । त्यसमाथि मेलाजस्तो हुलमुल हुने ठाउँमा लाखौं रुपैयाँ बोकेर आउन समस्या हुन्छ । त्यसैले केही रकम अग्रिम दिएर बुकिङ गर्ने धेरै रहेको उनी बताउँछन् ।
रु.५० को टिकटमा रु.१०० को सीमकार्ड
मेलामा आउने सर्वसाधारणले ५० रुपैयाँको टिकट काट्नुपर्छ । रु.५० को टिकट काटेका सर्वसाधारणलाई आयोजकले रु.१०० ब्यालेन्स भएको स्मार्टसेलको एकएकथान सीम पुरस्कार दिएको छ । त्यस्तै प्रत्येक दिन पाँच जनालाई लक्की ड्रमार्फत आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मेला व्यवस्थापन संयोजक अल्बर्ट बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
उनले अन्तिम दिन बम्पर लक्की ड्रमा एकजनालाई ३२ इन्चको एलईडी टीभी उपहार प्रदान गरिने बताए ।
पुस २६ गतेदेखि चालू एक्स्पो अवधिभर विद्युतीय सामग्रीमा १५ देखि ५५ प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था गरिएको छ । एकसय ७० वटा स्टल रहेको एक्स्पोमा एकसय वटा स्टलमा विद्युतीय सामग्रीमात्रै छन् । बाँकी ७० वटामा भक्तपुरको मौलिक हस्तकला, काष्ठकला, धातुकलाका उत्पादन एवं सामग्री, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सुनचाँदीका उत्पादन तथा वस्तुको प्रदर्शन एवं बिक्री व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अटोमोबाइल र फर्निचरका सामग्रीसमेतको प्रदर्शनी र बिक्री स्टल रहेको छ ।
भक्तपुर नपाको बजेट २ अर्ब १३ करोड
सूर्यविनायक नपाले ल्यायो १ अर्ब ३० करोडको बजेट
कपडा तथा सिलाईमा भ्याट हटाउन ज्ञापन
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ भक्तपुर जिल्ला शाखाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलगात । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू/इन डेप्थ
भक्तपुर । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ भक्तपुर जिल्ला शाखाको अध्यक्षमा नारायणप्रसाद भुसाल सर्वसम्मत भएका छन् ।
शाखाको शनिबार भएको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले भुसालको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्य समिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो ।
जसअनुसार समितिको उपाध्यक्षमा राजकुमार बुढाथोकी, महासचिवमा विनोदप्रसाद सापकोटा, कोषाध्यक्षमा दीपा बस्नेत, सचिवमा राम न्यौपाने र उपकोषाध्यक्षमा किरण माकजू श्रेष्ठ रहेका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा कृष्णराज बुढाथोकी, सीताराम खाइतू र चेतन शाक्य सर्वसम्मत भएका छन् ।
नवनिर्वाचित अध्यक्षले जिल्लाका औषधि व्यवसायीहरुको हकहित संरक्षण गर्दै व्यवसायीहरुलाई एकजुट बनाई आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्न लागिपर्ने वचन दिए ।
उनले जिल्लाका सम्पूर्ण औषधि व्यवसायीहरुलाई गोलबद्ध गर्न लाग्नेसमेत बताए ।
उनका अनुसार जिल्लाका करिब चारसय औषधि व्यवसायीहरु छन् तर संघमा त्यसको आधामात्रै आवद्ध छन् ।
निर्वाचनअघि प्रदेश नं. ३ का सांसद शशिजंग थापाले शाखाको प्रथम जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गरेका थिए । औषधि व्यवसायीसमेत रहेका सांसद थापाले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय औषधिमात्रै बिक्री वितरण गर्न सुझाव दिए ।
‘अस्पताल टाढा रहेका तथा पहुँच बाहिर रहेका सर्वसाधारणको लागि घरआँगनमा खुलेका मेडिकल तथा फार्मेसी नै औषधोपचार पाउने पहिलो माध्यम हो’, सांसद थापाले भने, ‘त्यसैले हाम्रो सेवा विश्वसनीय, गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रम प्रथम जिल्ला सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक दिलकुमार दुवालको सभापतित्वमा भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नपाको बजेट प्रस्तुत गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशी । तस्बिर : इन डेप्थ
पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
भक्तपुर नपाको पाँचौं नगरसभामा उपप्रमुख रजनी जोशीले कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ ९९ करोड ८० लाख अर्थात ४६.८३ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ १ अर्ब १३ करोड ३० लाख अर्थात ५३.१७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
बजेटमा बाह्य स्रोतबाट एक अर्ब २२ करोड २४ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट ६२ करोड आय हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
उपप्रमुख जोशीले आ.व. २०७६/७७ का लागि बाह्य स्रोतअन्तर्गत संघीय सरकारबाट सःशर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानवापत कूल ४८ करोड ६५ लाख आय हुने अनुमान गरिएको बताइन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट ५ करोड आम्दानी हुने अनुमान रहेको उनले सुनाइन् ।
बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा राजश्व बाँडफाँट र मालपोत कार्यालयबाट कूल १३ करोड ८० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम तथा सडक बोर्डमार्फत २ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने उपप्रमुख जोशीले बताइन् ।
उनका अनुसार भक्तपुर नपा ९ च्याम्हासिंहमा निर्माणाधीन छाती पुनःस्थापना केन्द्रका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सक तथा प्राविधिक संस्था (जिम्टेफ) बाट १ करोड १४ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित आवास योजना समयमै सम्पन्न गर्ने हेतुले नगरपालिकाले यस वर्ष ऋण सहयोगवापत २५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताइन् ।
पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षणलाई बढी बजेट
पाँचौं नगरसभामा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणको लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटको कूल रकमको ७२ करोड ९१ लाख १० हजार अर्थात २४.२१ प्रतिशत रकम विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणको लागि छुट्याइएको हो ।
भक्तपुर पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो । यहाँका संरक्षित सम्पदा अवलोकन गर्न बाह्य पर्यटकहरु भक्तपुर भ्रमण गर्छन् । र, भक्तपुर नपाले पर्यटन सेवा शुल्कबाटै सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय गर्दै आएको छ । साथै २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुराएका सम्पदाहरुमध्ये अझै मुख्य मुख्य सम्पदाहरुको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ ।
शिक्षा दोस्रो प्राथमिकतामा
भक्तपुर नपाले विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणपछि शिक्षा क्षेत्रलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले कूल बजेटको १४.४२ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ७३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । नपा आफैले दुइटा इञ्जिनियरिंग कलेजसहित ६ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै आगमी आ.व.मा नगरको कुनै एक सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख जोशीले स्पष्ट पारिन् ।
बाल विकास सहजकर्तालाई मासिक ४ हजार थप पारिश्रमिक
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत वालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक)हरुलाई भक्तपुर नपाले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी प्रतिव्यक्ति मासिक चार हजार रुपैयाँ थप पारिश्रमिक दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उसले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २५ करोड ५४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तर शैक्षिक स्तर राम्रो भएका जेहेनदार एवं मेधावी विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहयोग गर्ने हिसावले नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण कोषको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ आ.व.का लागि नगरपालिकाले उक्त कोषमा ४ करोड ९९ लाख ९० हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।
भक्तपुर नगरलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको लागि उत्कृष्ट गन्तव्यस्थल बनाउने उद्देश्यसहित आगामी वर्ष भक्तपुर महोत्वस आयोजना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भक्तपुर नपाले पहिलोपटक सन् १९९८ मा भक्तपुर महोत्सव आयोजना गरेको थियो ।
नगरबासीको खानेपानी समस्या न्यूनीकरण गर्न भक्तपुर नपाले नगरका ठाउँ ठाउँमा भूमिगत पानीको स्रोत पहिचान गरी खानेपानीको व्यवस्था एवं खानेपानीको पाइप सुधारको लागि ३ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै युवा तथा खेलकुदको लागि ५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भक्तपुर नगरले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ४ करोड ८६ लाख ९० हजार, फोहर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधारका लागि १३ करोड ५७ लाख ५० हजार, साँस्कृतिक प्रवद्र्धनका लागि २ करोड ३० लाख, कृषि तथा पशु सेवाको लागि १ करोड ६४ लाख र नपाका कर्मचारीहरुलाई खाजा खर्चवापत प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच सय रुपैयाँ थप सुविधा दिने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि नपाको बजेट प्रस्तुत गर्दै सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जूना बस्नेत । तस्बिर : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
नगरपालिकाको पाँचौं नगरसभामा उपप्रमुख जूना बस्नेतले चालूतर्फ ११ करोड २८ लाख, सामाजिक सुरक्षातर्फ ८ करोड ९९ लाख, विषयगत शाखातर्फ ५ करोड १० लाख र ससर्त कार्यका लागि ३५ करोड ४३ लाख तथा पँुजीगततर्फ ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ गरी कूल एक अर्ब ३० करोडको बजेट पेस गरेकी हुन् ।
उनले प्रस्तुत बजेटमा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ४६ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकी छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड १३ लाख, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट १० करोड, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानतर्फ २० करोड ३८ लाख र नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटको रकम १४ करोड १० लाख ३० हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम ८ करोड ९९ लाख र अन्य स्रोतबाट ४ करोड १० लाख रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तुत बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १७० प्रतिशतले बढी भएको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
सूर्यविनायक नपाले चालू वर्षको लागि ७६ करोड ४५ लाख २७ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको थियो । जसमा चालू खर्चतर्फ ३९ करोड २४ लाख ४३ हजार र पूँजीगततर्फ ३७ करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पेस गरिएको बजेटमा वडातहको कूल बजेट १२ करोड ७० लाखमध्ये १२ करोड पुँजीगततर्फ र विषयगत शाखा लक्षित वर्गमा प्रत्येक वडाका लागि कम्तिमा ७ लाखका दरले ७० लाखको क्षमता विकास तथा विविध आयआर्जनका कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ’, उपप्रमुख बस्नेतले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै नगरपालिकाको स्रोतलाई ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने नीतिअनुरुप प्रत्येक वडामा कम्तिमा १ वटा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको योजना पर्ने गरी ११ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।’
नगरस्तरीय विभिन्न पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुका लागि थप १० करोड ७० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटअनुसार २०७६ को जेठ मसान्तसम्म चालूतर्फ २९ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिइन् । पूँजीगततर्फ २८ करोड ३८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ अर्थात ७६ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताइन् ।
उनका अनुसार जेठभित्र वडास्तरीय पूँजीगत बजेटबाट जम्मा १४०, नगरस्तरीय ८ वटा ठूला पूर्वाधार, लागत साझेदारी ६०/४० का १३ वटा, अन्य ५० वटा गरी कूल जम्मा २११ वटा पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् ।
उनका अनुसार जेठ महिनासम्म नपाले १२ करोड ८१ लाख ३ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कवापत १५ करोड ४२ लाख १९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आवमा संघको राजस्व बाँडफाँटबाट ३ करोड १३ लाख ९९ हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ, नगद लागत साझेदारीबाट एक करोड २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ६ करोड ५७ लाख ९० हजार, संघको समानीकरण अनुदानतर्फ १९ करोड ६१ हजार र प्रदेशको समानीकरण अनुदानतर्फ ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ नपाले प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै संघको सशर्त अनुदानवापत २१ करोड १ लाख २५ हजार, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट ८ करोड ११ लाख ८० हजार, सडक बोर्डबाट ३७ लाख ६२ हजार ६ सय सात, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमवापत ५४ लाख ८७ हजार, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट एक करोड ५ लाख र अन्य आय २ करोड ४० लाख ९४ हजार गरी जम्मा रु. ९३ करोड २० लाख ४२ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा आम्दानी दाखिला भएको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिइन् ।
उनले जेठ मसान्तसम्म नपाले गरेको आम्दानी स्वीकृत बजेटको १२२ प्रतिशत भएको दावी गरिन् ।
‘असार महिनामा थप १७ करोड ५४ लाख ३७ हजार सात सय २६ रुपैयाँ विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी हुने अनुमान छ’, उनले भनिन्, ‘यस हिसाबले चालू आवमा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा एक अर्ब १० करोड ७४ लाख ८० हजार पाँच सय ८७ रुपैयाँ आय प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।’
शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको भादगाउँ स्पोर्टस् एण्ड लिजरको स्वीमिङ पुल । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । भक्तपुरमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वीमिङ पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितासमेत गर्न सकिने गरी भादगाउँ स्पोर्टस् एण्ड लिजरले उक्त स्वीमिङ पुल शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
उक्त पोखरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० फिट चौडाइ र ८० फिट लम्बाइ रहेको छ । भादगाउँले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका ८ सिपाडोलमा एक करोड ८० लाख लगानीमा उक्त स्वीमिङ पुल निर्माण गरेको थियो ।
भादगाउँ स्पोर्टस् एण्ड लिजरका अध्यक्ष रविनारायण कायस्थले मनोरञ्जनसँगै प्रतियोगितासमेत गर्ने लक्ष्य लिएर स्वीमिङ पुल सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
‘एक हप्ताको परीक्षणपछि शनिबारदेखि स्वीमिङ पुल सर्वसाधारणको लागिसमेत खुला गरेका छौं’, उनले भने, ‘स्वीमिङ पुलको लागि पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान गरेका छौं । जसले गर्दा पौडी खेल्दा आँखा पोल्ने तथा एलर्जी हुनेछैन ।’
उनका अनुसार पौडी पोखरीमा एकैपटक दुईसय जनासम्मले मनारेञ्जन लिन सक्छन् । जहाँ तीन देखि आठ फिटसम्मको गहिराइ छ । त्यस्तै डेढ फुट गहिराइ भएको बच्चाहरुको छुट्टै पौडी पोखरीको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘पौडी पोखरीसँगै ज्याकुजी, साउना बाथ र स्टीम बाथको व्यवस्था गरेका छौं’, भादगाउँका सञ्चालक उत्तम थुसाले थपे, ‘यहाँ पौडी खेल्ने आउनेहरुको सुविधाको लागि स्वीमिङ कस्टम, ट्युबलगायत सबै पाइने व्यवस्था गरेका छौं ।’
पौडी पोखरी सञ्चालनमा ल्याउनुअघि नै भादगाउँले लनटेनिस र ब्याडमिन्टनका दुईदुईवटा कोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । दुवै कोर्ट रात्रीकालीन समयमा समेत सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरी बत्तीको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष कायस्थले जानकारी दिए ।
लन टेनिस वा ब्याडमिन्टनका खेलाडीहरुको मागअनुसार पौडी पोखरी सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
उसले सर्वसाधारणको लागि प्रतिदिन चार सय रुपैयाँ शुल्क राखेको छ । १२ वर्षमुनिका बालबालिकाको लागि भने तीनसय रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै स्कुलका विद्यार्थीहरुको लागि एकसय पचास रुपैयाँमा पौडीको मज्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको भादगाउँले जनाएको छ ।
करिब आठ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भादगाउँ स्पोर्ट एण्ड लिजरमा बालबालिकाको लागि फनपार्कसँगै सेमिनार हलसहितको रेस्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भादगाउँमा अध्यक्ष कायस्थका अनुसार करिब दुईसय जना क्षमताको सेमिनार हलसहितको रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
उनले अबको ६ महिनाभित्र होटलसमेत सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
‘भवनसहित थप नौ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको छ’, उनले भने, ‘उक्त भवनमा ४० वटा कोठा व्यवस्था गर्दैछौं । जहाँ पार्किङको लागि प्रशस्त ठाउँ रहेको छ ।
सुरुमा दुई करोड रुपैयाँबाट लगानी सुरु गरिएको भादगाउँ स्पोर्ट एण्ड लिजर अहिलेसम्म नौ करोड पुगेको बताइएको छ ।